Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote 79 : Miandry azy ireo ny fonja
Depiote 79 : Miandry azy ireo ny fonja
Tamin’ny zoma faha 07 jona 2019 teo dia namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety mahakasika ireo depiote 79 mianadahy izay voalaza fa nanao kolikoly momba ny fandaniana lalàna fehizoro mahakasika ny fifidianana tamin’ny faha 28 martsa ka hatramin’ny 3 aprily 2018 teny amin’ny hotely Paon d’Or teny Mandrosoa Ivato ny minisitra ny Fitsarana Randrianasolo Jacques tao amin’ny toeram-pandraisam-bahiny Carlton Anosy. Mahakasika ny ady vaovao amin’ny kolikoly moa no nanaovana atrikasa tao amin’ity toerana ity.
Raha tsiahivina vetivety ny tantara dia niteraka kolikoly avolenta tao amin’ireo solombavambahoaka tao Tsimbazaza ny fandaniana ny lalàna Mahafaly Olivier Solonandrasana sy Hery Rajaonarimampianina iny. Raha ny loharanom-baovao tamin’ireny fotoana ireny dia novidina dimampolo tapitrisa ariary ny depiote iray mba handany io tolo-dalàna io. Nisy koa ny horonan-tsary nivoaka tamin’ny tambazotran-tserasera izay nahitana ireo depiote ireo nizara vola sy nandresy lahatra ny namany amin’izany kolikoly goavana izany.
Iny raharaha iny no nahatonga ny korontana pôlitika nipoitra ny volana may 2018 ka nampiongana ny governemanta Solonandrasana Olivier Mahafaly.
Raha atao ny kajy amin’ny vola voalaza fa nozaraina tamin’ireo depiote ireo dia 50 000 000arX 79= 395 000 000 ariary na 1 975 000 000iraimbilanja na 2 miliara iraimbilanja latsaka kely eo ho eo no vola nividianana azy ireo.
Iza avy ireo depiote izay voalaza fa nandray io vola io?
Mazava tsara ny raharaha fa ireo depiote izay tsy teny amin’ny fitokonana teny amin’ny Parvis tao amin’ny kianjan’ny 13 may eo anoloan’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo.
Tsy ireo irery nefa no tokony ho voarohirohy amin’ity raharaha ity satria raha toa ka misy ny fividianana olona sy ny kolikoly avolenta toa ireny dia tsy maintsy misy koa ny mpanome izany.
Mbola mazava koa ny raharaha amin’iny satria ny governemanta Solonandrasana Olivier Mahafaly izay praiminisitra tamin’izany andro izany sy ny filohan’ny repoblika Hery Rajaonarimampianina no ao ambadik’ireny zavatra ireny. Na mivantana na ankolaka no fitrangan’izany dia tsy tokony ho afa-maina amin’izany izy roalahy ireo. Ny minisitra niaraka aminy sy ny mpikambana tao amin’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) nanampy azy koa torak’izany, ka tokony tsy ho afa-maina koa raha tena hiady marina amin’ny kolikoly.
Tao alohan’ny fifidianana izay ho solombavambahoaka tamin’ny volana aprily 2018 teo dia nandeha ny resaka fa halaina ambavany eny PAC (Pôle anti-corruption) iny raharaha iny. Somary nangingina nefa izany tao anatin’ny fifidianana ny volana may 2019 lasa teo. Koa raha nanontaniana ny fitohizan’izany famotorana hataon’ny PAC izany ny minisitra ny Fitsarana Randrianasolo Jacques ny zoma lasa teo dia nanambara fa tsy maintsy atao ny fanadihadiana momba azy iny satria efa any amin’ny PAC ny raharaha. Tsy tokony hatahotra isika fa ho hitantsika eo ny vokany, hoy izy.
Miady mafy amin’ny kolikoly ny firenena ankehitriny ary isan’ny vaindohan-draharahan’ny fanjakana Andry Nirina Rajoelina izany. Nanamafy koa ny minisitra ny Fitsarana ity ingahy Randrianasolo Jacques fa mila ovana ny lalàna mahakasika ny fanenjehana olona ambony eto amin’ny firenena raha nilaza ny momba ny HCJ (Haute cour de justice) izy satria mitarazoka loatra ny “procédure”.
Rahoviana no hipoitra ity raharaha mahavoakasika ny mpanao pôlitika mpanao kolikoly ity. Raha tanterakin’ny PAC sy ny fanjakana ankehitriny izany dia inoana fa hilamina manomboka izao ny ao amin’ny Antenimierampirenena ao. Raha mandeha io raharaha io dia be no higadra ireo depiote sy ireo mpitondra teo aloha ka isan’izany ingahy Hery Rajaonarimampianina sy Solonandrasana Olivier izay lehiben’ny fitondram-panjakana tamin’ireny fotoana ireny.
Andrasan’ny maro akaiky ity raharaha ity. Tsy maintsy hisy koa ny depiote izay nilatsaka hofidiana farany teo na lany na tsy lany no tsy maintsy hiatrika ity fanadihadiana ity ary mety higadra mihitsy aza. Maro amin’izy ireo nefa no lasa mpanohana an’i Andry Rajoelina mafana fo ankehitriny ka ho hita eo ny fihetsika ny fanjakana eo anatrehan’izany.